Ngaba Umtshato UngumShramente Wenkolo okanye Iziko Zoluntu?
Abaninzi bathi umtshato ubaluleke kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo umtshato wenkolo - baqhawula umtshato malunga nemigangatho yonqulo kuphela. Ngako oko, umtshato osemthethweni unomdla wesigxile kunye nokungenakulungiswa kokungenelela kwimeko yombutho kwizinto eziyimfundiso yonqulo. Ngenxa yendima yendabuko yenkonzo ekungcwaliseni imitshato kunye nokulawulwa kwemikhosi yomtshato, oku kuqondakalayo, kodwa ayilunganga.
Ubume bomtshato buhluke kakhulu kwixesha elilodwa ukuya kwelinye kwaye ukusuka kuluntu olunye ukuya kolunye olandelayo. Enyanisweni, uhlobo lomtshato luye lwahluka kakhulu kangangokuba kunzima ukuza kunye nencazelo enye yomtshato efakazela ngokwaneleyo zonke iimvume zeziko kulo lonke uluntu oluye lwafundiswa ngoku. Le ntlobo yodwa iyakuqinisekisa ubuxoki bokuthi umtshato uyinkolo, kodwa nokuba sigxila kuphela kwi-West - nokuba yodwa eMerika-siyafumanisa ukuba unqulo aluzange lubonwe njengento ebalulekileyo.
Umtshato e-Early America
Kwincwadi yakhe ye- Public Vows: A History of Marriage and Nation , uNancy F. Cott uchaza ngokude ukuba umtshato odibeneyo, kunye noorhulumente karhulumente baye baseMelika. Ukususela ekuqaleni umtshato uye waphathwa njengeziko lezenkolo, kodwa njengesivumelwano somntu ngasese kunye nempembelelo yomntu:
Nangona iinkcukacha zomtshato zenziwa ngokubanzi phakathi kwexesha eliguqukayo lamaMerika, kwakukho ukuqonda ngokubanzi ukwabelana ngezinto ezibalulekileyo zeziko. Okubaluleke kakhulu kukubambisana komyeni nomfazi. "Umgaqo-mbumbano ococekileyo ... owamanyeneyo" ukujoyina ezo zibini "ngowona mphumo obaluleke kakhulu womtshato," ngokutsho kukaJames Wilson, owayengumongameli obalaseleyo kunye nomfilosofi wezomthetho.
Imvume yobabini nayo ibalulekile. "Isivumelwano samabini omabini, isiseko sontrakhontrakthi engqinelanayo, siyimfuneko kakhulu," kusho uWilson kwiintetho ezihanjiswe ngo-1792. Wabona imvume yomtshato njengento ephawulekayo yomtshato - eyona nto ibalulekileyo kunokubambisana.
Wonke umntu uthetha ngesivumelwano somtshato. Sekunjalo njengesivumelwano esasiyodwa, kuba amaqela awazange azimisele ngokwawo. Indoda nomfazi bavuma ukutshata, kodwa amagunya karhulumente abeka imimiselo yomtshato, ukuze ivelise imivuzo kunye nemisebenzi eqikelelweyo. Emva kokuba kwakhiwa inyunyana, iimbopheleleko zayo zazingqinelana nomthetho ofanayo. Umyeni nomfazi ngamnye babecala ukuba babekho isimo esitsha somthetho kunye nesimo esitsha kwindawo yabo. Oku kuthetha ukuba akunakuphulaphula imigaqo ngaphandle kokucasula uluntu olukhulu, umthetho, kunye nombuso, ngokunjalo nokucasula iqabane.
Ukuqonda ukuqala komtshato waseMelika kwakuxhomekeke ngokusondeleyo ekuqondeni kwabo karhulumente: bobabini babonwa njengamaziko akhululekile abantu abangena ngokuzithandela kwaye ngokunjalo banokuphuma ngokuzithandela. Isiseko somtshato sasingekho inkolo, kodwa iinqwenela zabantu abadala, abavumayo.
Umtshato kwiManje yamerika
Umntu woluntu womtshato apho uCott uchaza kwakhona uyaqhubeka namhlanje. UJonathan Rauch, encwadini yakhe ethi Gay Marriage , uxela ukuba umtshato awukho nje isivumelwano esizimeleyo:
[Ukuhamba] akusiyo nje isivumelwano phakathi kwabantu ababini. Isivumelwano phakathi kwabantu ababini kunye noluntu lwabo. Xa abantu ababini beza kwisibingelelo okanye ibhentshi ukuba batshata, abahambeli nje kuphela igosa elilawulayo kodwa bonke uluntu. Baya kwi-compact kungekuphela komnye kodwa kunye nehlabathi, kwaye i-compact ithi: "Thina, thina sibini, sinamathele ukwenza ikhaya kunye, sinyamekelane, mhlawumbi, sikhulise abantwana kunye.
Ukutshintshela ukuzinikela kokunyamekela esikwenzayo, wena, uluntu lwethu, asiyi kuthi nje ngabanye ngabanye kodwa njengabantu abathandekayo, intsapho, esinika igunya lokuzikhethela kunye nesimo esikhethekileyo umtshato kuphela. Thina, esi sibini, siya kuxhasana. Wena, uluntu, uya kusixhasa. Ulindele ukuba sibe khona omnye nomnye kwaye kuya kusinceda sihlangabezane nezo zilindele. Siza kwenza okusemandleni ethu, ade sife
Kwiingxoxo malunga nomtshato wesini , ingqalelo enkulu ihlawulwa ngamalungelo omthetho abantu abathandanayo bobulili obufanayo baphoswa ngenxa yokungakwazi kwabo ukutshata. Ukuba sibhekisisa loo malungelo, kunjalo, sifumanisa ukuba uninzi malunga nokuncedisa izibini ezithandanayo. Ngamanye, amalungelo anceda abatshatileyo baxhasane; bathathwe ndawonye, ​​banceda uluntu luvakalise ukubaluleka kokuba ngumlingane kunye nenyaniso yokuba utshatile utshintsho onobani kunye nesimo sakho kuluntu.
Umtshato eMelika ngokwenene unkontileka-isivumelwano esiza neembopheleleko ezingaphezu kwamalungelo. Umtshato lilungelo lomntu ongekho ngoku kwaye aluzange lithembele kunqulo okanye naluphi na unqulo ngokubhekiselele kulungelo, ubukho okanye ukuqhubeka. Umtshato ukhona kuba abantu banqwenela kwaye uluntu, esebenza ngurhulumente, lunceda ukuqinisekisa ukuba izibini ezitshatileyo zikwazi ukwenza oko zifuna ukuze ziphile.
Akukho nkonzo inqulo efunekayo okanye efanelekileyo.
Yintoni ekhoyo? Imbali ekhoyo kunye nokucinga
Kufuneka Ufunde Amabhuku Ukuba Uthanda 'Romeo noJuliet'
I-Ramayana: Isishwankathelo nguStephen Knapp
Iingoma zeAlaylay Best Best